Coronavirus: 9 waxyaabood oo wali aan laga aqoonin Covid-19. |
Coronavirus: 9 waxyaabood oo wali aan laga aqoonin Covid-19.
Waxa la moodaa wax soo jireen ah laakiin dunidu waxay Coronavirus ka warheshay bishii Diisember ee kal hore.
In kasta oo ay saynisyahannada dunidu dadaal wadaan, hadana waxa weli cad in aan wax badan laga fahmin oo dunida oo dhan waxa ka socda tijaabooyin lagu doonayo in su’aalahaa jawaabo loogu helo.
Su’aalaha kuwooda ugu waaweyn qaarkood waa kuwan:
1. Tirada dadka uu ilaa haatan ku dhacay.
Waa su’aalaha ugu fududud midkood laakiin ilaa haatan ah ta ugu muhiimsan. Waxa jira in boqollaal kun oo qof oo la xaqiijiyey in uu dunida oo dhan ku dhacay laakiin intaa la ogyahay wax kooban ayay ka tahay tirada dhabta ah ee dadka uu ku dhacay. Tirada la sheegayo qudheeda ayaan sugnayn maadaama oo dadka qaarkood ay Virus kii sidaan laakiin aanay ku soo bixin calaamadihii xanuunku.
In dawo loo helo ayaa waxay ku xidhantahay in marka hore ay cilmi baadheyaashu xaqiiqsadaan in qofka laga qaadayo dhiigga tijaabada ahi qabo virus ka iyo in kale, markaa ka dib uun baana la ogaan doonaa in uu fidayo iyo in kale.
2. Ilaa xadkee ayuu runtii dilaa yahay.
Ilaa inta aan ogaanayno inta qof ee u ku dhacay, suurto gal noqon mayso in aan xaqiiqsanno xaddiga dhimashada uu keeno. Haatan qiyaastu waxa weeyi in ku dhawaad 1% dadka uu u dhacay virus ku ay u dhinteen. Laakiin haddii ay tirada dadka u dhintay ay cudurro kale u weheliyeen xaddiga dhimashadiisu way ka yaraan kartaa intaa.
3. Calaamadahiisa buuxa.
Calaamadaha ugu waaweyn ee Coronaviurs lagu gartaa waxa weeyi xumad, qufac qallalan kuwaas oo ah kuwa ay tahay in aad ka foojignaataa.
Cune-xanuun, madax xanuun iyo shuban ayaa iyagana sidoo kale la sheegay inuu leeyahay waxaana jira shaki ah in uu xataa keeno in qofku waxba urin waayo.
Laakiin su’aasha ugu muhiimsani waxa weeyi hadii ay calaamaduhu yihiin calaamado khafiif ah oo kuwa hargabka oo kale ah sida duuf badan ama hindhisada ee bukaanka qaarkood yeeshaan [ma noqonayaan calaamadaha keliya ee lagu garan karo].
Daraasado la sameeyey ayaa tibaaxaya in ay suurto gal tahay in dadka qaarkood virus ka qaadeen laakiin aanay is ogayn oon calaamado ku soo bixin.
4. Doorka carruurtu ku leeihiin fiditaankiisa.
Caruurta runtii wuu ku dhici karaa coronavirus, hase yeeshee badankooda waxa lagu arkaa uun calaamado khafiif ah, in faro ku tiris ahina way u dhinteen marka la barbar dhigo dadka waaweeyn.
Caruurtu sida caadiga ah cudurrada aad bay u fidiyaan sababtana waxa ka qayb ah in ay had iyo goor garoonada lagu ciyaaro ay iskugu wada yimaadaan laakiin ilaa hadda ma cadda sida ay virus kan u fidin karaan.
5. Waa halkee meesha uu sida saxda ah uga yimid.
Virus kani wuxu ka soo baxay Wuhan oo Shiinaha ku taal dabayaaqadii 2019 haakaas oo sariibado badan oo hilibka xawayaanka lagu iibiyaa ku yaalaan.
Coronaviurs oo si rasmi ah loogu bixiyey Sars-CoV-2 ayaa aad ugu dhaw virus yada ku dhaca fiidmeerta, hase yeeshee waxa la moodayey in virus kani ka soo gudbay fiidmeerta ka dibna aadanaha u soo gudbay.
Waxa se aan weli la ogayn “xaqiiqda isku xidhi karta” dadka iyo xawayaankaa ee la odhan karo markaas ayaa virus kani aadanaha u soo gudbay.
6. Xililaga kulaylaha mark la gaadho ma yaraan doonaa.
Durayga iyo hargabku waa wax had iyo goor caadi ah bilaha xili qaboobaha lagu jiro laakiin lama oga marka kulaylaha la gaadho in ay wax iska bedeli donaan fiditaanka virus kan.
Xukuumadda Ingiriiska ayaa la taliyeyaasheeda dhanka arimaha saynisku waxay qabaan in ay suurto gal tahay in uu virus kani ka yaraan doono xili kulaylaha oo kaba yaraan doono hargabka iyo durayga.
Hadii Coronavirus ku hoos u dhaco marka kulaylaha la gaadho waxa soo baxaysa khatar ah in tirada dadka uu ku dhici doonaa kordhi doonto marka la gaadho xiliga qaboobaha markaas oo isbitaalada laftooda ay ku badan yihihiin bukaanka laga dawaynayo xanuunada xiliga qaboobaha.
7. Maxay dadka qaarkood uga soo baxaan calaamado aad u halis ahi.
Covid-19 dadka badankooda wuxu u haleelaa si khafiif ah laakiin qiyaastii 20% dadka uu ku dhaco ayuu halis ku noqdaa, su’aashu waxay tahay waa maxay sababtu?
Arimtan waxa suurto gal ah in kolba sida difaaca jidhka qofku yahay ay qayb ka tahay, waxa kale oo suurto gal ah in ay noqon karto qaab dhismeedka hidde sideyaasha qofka. Hadii arintan la fahmo waxay sahli doontaa in la ogaado siyaabo lagu samato bixin karo dadka daryeelka aadka ah u baahan kara marka uu ku dhaco.
8. Difaaca jidhku intee in le’eg ayuu caabiyi karaa, mar kale se ma ku dhici karaa qofkii ka kaca.
Waxa jiray hadal hayn badan laakiin caddayn buuxda looma hayo mudada difaaca jidhku iska caabiyi karo virus kan.
Bukaanka ayay suurto gal tahay in qudhoodu ay yeeshaan adkaysi ay kaga hortagi karaan oo haddii uu xoogaysto ay kaga bogsan karaan ba difaaca jidhkooda oo keli ah laakiin maadaama oo xanuunkani qiyaastii dhawr bilood uun uu jiray xog buuxda lagama ahayo. Hadal hayn ayaa jirta ah in dadka uu laba goor ku dhacaa aan si buuxda looga heli karin dhiigooda virus ka iyaguna sheegaan ba in ay ka dawoobeen.
Arinta difaaca jidhku se waxa weeyi mid muhiim ah marka la doonayo in la derso cudurkan sida uu noqon doono mustaqbalka dheer.
9. Virus kani ma is dhalan rogi karaa.
Virus-yada had iyo goor way is dhalan rogaan laakiin isbedelkaa hidde siyadayaashoodu had iyo goor aad u ma dooriso.
Qaaciidada guud ee jirtaa waxa weeyi in virus-yadu markay is dhalan rogaan ay mustaqbalka noqdaan kuwo aan halis badan lahayn laakiin in coronavirus sidaa noqon karo looma hayo dammaanad buuxda.
Cabsida jirtaa waxa weeyi hadii virus-kani is dhalan rogo difaaca jidhku ma garawsan doonaa inuu isagii yahay iyo in kale iyo in aan tallaal lagaga hor tagi doonin (sida hargabka iyo durayga oo kale).